Jasmine : June 2011
ချစ်ခဲ့ဖူးသူအတွက် ဈာပနတစ်ခု ကျင်းပခြင်း
Posted by စံပယ်ချို | Monday, June 27, 2011
ခုတော့ မကောင်းသတင်း ဖြစ်ရပြီ။
သီလ ပျက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်အလား၊
ပေးခဲ့တဲ့ သောက အထွေထွေကို
နှလုံးသားမှာ တယုတရ ပိုက်ထွေးပြီး
(ယောင်တောင်တောင်) နဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာက
မင်းလေးကို ဂရုဏာ တရား
ငါ့ဘ၀ ခဏခဏ လှဲကျ
အပြုံး မရှိတဲ့ အမုန်း။
မင်းဆိုးသမျှ အတိုးလဲ မယူပါ။
အမှားမကင်းသူပဲ ရယ်လို့ ရင်မှာဆွေးပေမယ့်
မရှိတဲ့ သစ္စာတရား ကို
မြေမြုပ်လိုက်တော့ ပြောပါရစေ။ ။
ကျွန်မ၏ နူးညံ့မှု မရှိသော ကဗျာများကို
Posted by စံပယ်ချို | Friday, June 24, 2011
ဖတ်ခဲ့ဖူးသော မောင်ကောင်းထိုက် ဟာသပဒေသာမှ
Posted by စံပယ်ချို | Wednesday, June 22, 2011
မြင်လှဲ့ ပါလို့ မပြောခဲ့ဘူး။
မင်းလေးပေါ် အမုန်းတရားတော့ မထားဘူး။
ဒါပေမဲ့ မှန်းဆ မရ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကိုဖွင့်ဆိုပါသည်။(ယောက်င်္ကျားလေးဖက်မှ ရေးသားထားခြင်း)
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, June 21, 2011
ပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတိုင်းအတာ တူတူပြန်ရခဲ့လား
အလွမ်းဆိုတဲ့ ပန်းတွေ မစိုက်ချင်ဘူး။
ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းတွေပဲ
ကိုယ့်နှလုံးသားကို ကြိုး ၆ ကြိုး
သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ အသံ တွေ
ကြိုးတပ်ထားတဲ့ နှလုံးသား ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကနေပြီး
မကုန်နိုင်တဲ့ အကြင်နာ တရားတွေက
ပြူတစ် ပြူတစ်နဲ့ ကြည့်နေလေရဲ့
ခြေစုံပစ်ပြီး ယုံပေးပါ တဲ့......................
အဲဒီစကား မကြာသေးဘူး ပြောခဲ့ဖူးတာ
ဒီနေ့တော့ အဖြစ်အပျက် ရုတ်တရက်မို့
အဲတာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ ကောင်လေးရေ
အဲတာ ကောင်းလေး နှလုံးသားလား။
ဒီနှစ်မိုးက အရင်ထက် သာနေသတဲ့
နေ့စဉ်ရက်ဆက် တချူံးချူံး နဲ့ အဆက်မပြတ်
တောင်ကျရေတွေကလဲ တဝေါဝေါ စီးဆင်းနေလေရဲ့
ရင်ဘတ်ထဲ သံယောဇဉ် အမြစ်များ
ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် ကောင်လေးက
ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲကောင်လေးရေ။ ။
***အခုသူမရှိတော့ပါ*** (ကိုခြူးသို့) ။ ကိုယ်တိုင်ရေး ရင်တွင်းစာ ။
Posted by စံပယ်ချို | Monday, June 20, 2011
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာက သိပ်ကိုအေးစက်နေတဲ့ ကျွန်မတို့နေတဲ့ တိုက် ၆ လုံး ရဲ့ ဆောင်းညလေးတွေပေါ့............
သူ့လက်ချောင်းတွေများဆို အေးခဲလွန်းလို့ ကွေးလို့တောင်မရနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေရပါတယ်..ဒါပေမဲ့...တီးနေကျ
ဂီတာ ကိုတော့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သူတီးခပ်နိုင်ပါတယ်....တိုက်ရှေ့မှာ လူကြီးတွေလုပ်ထားပေးတဲ့(မြို့ပြင်ကယူထားတဲ့ထင်းရှုးတုံးကြီး)
မီးဖိုရှိလို့ တော်သေးတာပေါ့...တိုက်နားပတ်ဝန်းကျင်က သူငယ်ချင်းအားလုံး မီးဖိုဘေးမှာ....
နှင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ၀န်းကျင်...လမ်းမီးတွေက ၀ိုးတ၀ါး... စည်းချက်ကျကျမြည်အောင် တီးနေတဲ့ သူရဲ့ ဂီတသံဟာ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးထားတယ် (တချို့ရက်တွေ ပူစူးလဲပါတယ်).....
သူတို့မိသားစုအားလုံးမှာတွေ့ရတတ်တယ်....တခါတလေ .....သူရဲ့အကြည့်တွေဟာ နှလုံးသားကို နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်စိမ့်ဝင်ပြီး နွေးထွေးသွားစေခဲ့ပါတယ်..သူရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို သိနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာ
စိတ်ရဲ့ တံခါးပေါက်ဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးများကနေတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုတွေ့မြင်နိုင်ကြပါတယ်...ကျွန်မသိခဲ့ရတယ်...ဒါပေမဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စ
တစ်ခုလိုပဲ စိတ်ထဲထားလိုက်ပါတယ်...မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအပေါ် သနားကြင်နာတတ်ခြင်း၊ ကူညီဝေမျှတတ်ခြင်း တွေ သူဆီမှာ အပြည့်ရှိတယ်....သူငယ်ချင်းအားလုံးကလည်းသူကို လေးစား ချစ်ခင် ကြပါတယ်..ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ဒီလိုပဲဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ကျောင်းတွေ မဖွင့်ခင် ၁..၂..ရက်အလိုမှာ သူကျွန်မကိုပြောပါတယ်...မိဂျက် နင့် အတွက်ငါ သီချင်းတစ်ပုဒ် စပ်နေတယ်ပြီးခါနီးပြီတဲ့။
သူ နဲ့ ကျွန်မ အသက်ချင်းကွာပါတယ်....
သူ့အမကျောင်းဆရာမက ကျွန်မ မေမေရဲ့ ကျောင်းနေဖက်....သူအမေက ကျွန်မမေမေ တို့ရဲ့
ဆရာမပါ....ဒီမိသားစုတွေဟာ ကျွန်မ မမွေးခင် အချိန်ကတဲက သိခဲ့ကြတာပါ... သူ့အမကျောင်းဆရာမကယခု(အငြိမ်းစားကျောင်းအုပ်)ပါ။
သူတို့မိသားစု အားလုံး English စာတော်ကြပါတယ်... English သီချင်းတွေ တော်တော်များများ သူသင်ခဲ့ပေးပါတယ်။ သူက ကျွန်မကိုကလေးတစ်ယောက်လိုပဲဆက်ဆံပါတယ်....
အဲတာ..ကျွန်မ ထင်မြင်ချက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ထင်မြင်ချက်ပါ....အခုအချိန်ကျွန်မ စဉ်းစားကြည့်တော့လဲဒီလိုပါပဲ...ဒါပေမဲ့ သူရင်ထဲ ထိဝင်မကြည့်နိုင်ပါဘူး...
ကြည့်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလဲ ကျွန်မဆီမှာ အဲဒီအချိန်က မရှိခဲ့ပါဘူးလေ...
မကြာခင်အချိန်မှာပဲ.. သူသီချင်းခွေ(ခွေကြမ်း)ကိုပေးပါတယ်....သိချင်းနာမည်က ဒီဇင်လာညတစ်ည ပါ...
နောက်ပိုင်းအဲဒီသီချင်းကို ဦးထီးဆိုင် ကိုသူရောင်းလိုက်ပါတယ်...
သူဟာ လေးစားထိုက်တဲ့ အနုပညာဖန်တီးရှင်တစ်ယောက်ပါ...အရင်အချိန်တွေမှာ သူက မြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဦးထီးဆိုင်တို့အဖွဲ့ရဲ့ Bass တီးခဲ့တဲ့ စောဂျက်ဆင်ပါပဲ။
ဂျက်ဆင်သန်းဖေ ဖြစ်ပြီး တီးဝိုင်းမှာတော့ စောဂျက်ဆင်ပါ။။။။။ ဒါပေမဲ့ ကရင်မဟုတ်ဘူး....မြန်မာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။။။
ခွေ အသစ်ထွက်တော့လည်း...သေချာ စာရေး...လက်မှတ်ထိုးပြီး ကျွန်မ အတွက် လာပေးပါသေးတယ်..
ကြုံရင် အဲဒီသီချင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါနော်... .ကိုခြူး က jasmine ကိုပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာညတစ်ည ပါ။။။
သီချင်းက အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်...သူခံစားချက် အပြည်နဲ့ ရေးထားလို့လား မသိပါဘူး....ဦးထီးဆိုင် ကလည်း အရမ်းကို အဆိုကောင်းခဲ့ပါတယ်..... ခုတော့ သူမရှိတော့ပါ.... ကျွန်မ နိုင်ငံခြားမှာရှိနေချိန်မှာ သူကွယ်လွန်ခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ သူရေးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာညတစ်ည ကတော့ ရှင်သန်ဆဲပါ.....ဦးထီးဆိုင်လည်း ကွယ်လွန်ခဲ့ ပါပြီ... တေးသံလေးတွေ ကတော့ အမြဲတမ်း သေဆုံးခြင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး...သာယာသော တေးသံ တေးသွား လေးတွေကတော့ လေ လှိုင်းကတဆင့် အမြဲ ပြန့်လွင့်နေမှာပါ။။။။။။။။။( ကိုခြူးသို့ အမှတ်တရ )
(ပူစူးဆိုတာ တချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့သော အဆိုတော် ဂရေဟမ် ပါပဲရှင်)
ငယ်သူငယ်ချင်း အိမ်နားနီးချင်း တစ်ယောက်အကြောင်းအဖြစ်ကျွန်မအားတဲ့အချိန်ကို ပူစူး နဲ့ ကျွန်မ တို့ရဲ့ငယ်ဘ၀ များကို ရေးသားမှာပါ။
ဤဘလော့ရှိစာများ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းခဲ့သည်ရှိသော် ကျွန်မ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
၀င်ရောက် ဖတ်ပေးသော သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...
စာဖတ်သူ အားလုံး အစဉ်လေးစားနေတဲ့ jasmine
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, June 19, 2011
ငါနိုင်ငံခြားကို ထွက်သွားတော့မယ် ပြောခဲ့တဲ့ အချိန်က နင့်ဆီက အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အပြုံး တစ်ခုတော့ တွေ့လိုက်ရတယ်
အချိန်ခဏတာအတွင်း တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီး "နင်ကငါ့ကို အသိလာပေးတာပဲ..တိုင်ပင်တာမှ မဟုတ်တာ ဒီအတွက် ငါကလဲ ဘာမှပြောစရာ မရှိဘူးလေ" ခုနက အပြုံးကတော့ရှိနေဆဲပါပဲ....ငါကလဲ ပြန်ပြီးတော့ ပြုံးပြ ခဲ့ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် ငါ့အပြုံးထဲမှာ ဘာမှမပါတာ ငါအသိဆုံးပဲ။(ပြုံးပြသူကို အားနားပြီးပြန်ပြုံးပြရသော အပြုံး)
ချစ်သူတွေမှ မဟုတ်တာ. သို့ပေသော်လဲ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းအားလုံးက တို့ ၂ ယောက်ကိုချစ်သူတွေလို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ ကျူရှင် တူတူသွားတယ် ကော်ဖီ တူတူသောက်တယ် ရှမ်းခေါက်ဆွဲ တူတူစားခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါတွေက ချစ်သူတွေပဲလုပ်ရမယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေရှိခဲ့လို့လား။
ဥပဒေရှိမှ စည်းတွေရှိမှာလေ....ခုတော့ဘာစည်းမှ မရှိဘူးပေါ့။ နင့်ကိုလဲ ချီးကျူးတယ်...ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ချီးကျူးတယ်
ဒီအသက် ဒီအရွယ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြူစင်နေခဲ့လို့ပါ၊ တစ်ဦးတည်းသော သမီးနဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သား ဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲ
ဘာတာဝန်မှမရှိခဲ့သလို မိဘတွေကလဲ ဘာတာဝန်မှ မပေးခဲ့ပါ. ပညာကိုသာကောင်းစွာသင်ခဲ့ရတာ
တို့ ၂ ယောက်ရဲ့ ဘုရားပေးသော ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲလေ။ ငါနိုင်ငံခြားကို ထွက်လာပြီး နင်လဲကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘူး..
ကိုယ်ပိုင်စီးပွါးရေးလုပ်တယ်လို့ကြားရတယ် ၊ ငါနိုင်ငံခြားမှာ ၆ နှစ်လောက်ကြာပြီး တစ်ခါပြန်ရောက်တော့
ချက်ချင်းလာတွေ့တာ နင်ပါပဲ ၊ ပြီးတော့ ကော်ဖီတူတူ သွားသောက်ဖြစ်တယ်....
"တစ်ယောက်တည်းလား" မထင်မှတ်တဲ့အချိန် အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့မေးခွန်း ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးတော့ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်
တစ်ကယ်ကိုမှ တစ်မျိုးကြီးပဲ ၊ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်းလဲ သေသေချာချာ မသိတော့ဘာကိုဖြေရမလဲ စဉ်းစားဆဲမှာ
"တစ်ယောက်တည်းလား" ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်မေးခွန်း
ခေါင်းညိတ် ရင်း " အေးပေါ့ တစ်ယောက်တည်းပဲ" နင့်မျက်နှာ နဲနဲတော့ ပြောင်းသွားသလိုပါပဲ...ခဏလေးပါ..
ပြီးတော့ နဂိုအတိုင်းပဲ ၊ ထူးဆန်းတာ တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်...နင်က အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ကတဲကရီးစားတွေ
အများကြီး ရှိနေခဲ့တာ..ဘယ်နှစ်ယောက်မှန်းတောင်မရည်တွက်နိုင်တော့ဘူး ၊ ရီးစားတစ်ယောက်ကိုလဲ ၃-၄ လ ထက်ပိုမတွဲ....(ချစ်သူမှ မဟုတ်တာတဲ့)
ချစ်သူဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဖူးဘူးတဲ့ ၊ ကောင်မလေးက အရင်ဖြတ်ခဲ့တုန်းကလဲ နင်ကတော့ ပြုံးပြုံးပါပဲ ၊ အသည်းကွဲတာတွေဘာညာ သရကာတွေ မဖြစ်ဘူးနော် ။ ငါကတော့ခုချိန်ထိ ရီစားဆိုတာ ဘာမှန်းမသိသေးပါ ။ ရင်ဘတ်ထဲကနေ နှစ်နှစ်ကာကာ
ချစ်ဖို့ကောင်းတာလဲ မမြင်သေးဘူးလေ ၊ နင်မေးတဲ့ ( တစ်ယောက်တည်းလား )ဆိုတာ အဲဒီဟာကိုမေးတာထင်ပါရဲ့
ဒါက ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်လေ ။...
တစ်ရက်တော့ မရောက်တာကြာခဲ့တဲ့ လွမ်းစေတီ ၊ ရပ်တော်မူ ၊ အိမ်တော် ၊ မြစိမ်းတောင် ၊ တစ်နေ့ကို တစ်နေရာ
နင်က ငါ့ကိုနေ့တိုင်း လိုလို လိုက်ပို့နေတာပါ ၊ အရင်လိုစကားတွေအများကြီးတော့ မပြောဖြစ်ဘူးနော်
မေးတစ်ခွန်း ဖြေတစ်ခွန်းလောက်ပါပဲ....မိုးရွာတဲ့နေ့တွေဆို အိမ်မှာပဲ မုန့်တစ်ခုခု လုပ်စားဖြစ်သည်။
တစ်ရက်တော့ မမျော်လင့်သော စကားကိုနင်ပြောတယ်နော် "နိုင်ငံခြား ကိုပြန်မထွက်ပါနဲ့လား"
" ဘာပြောတာလဲ" ကျွန်မ သူ့ကိုမေးမိပါတယ် ၊
"နင်မကြားဘူးလား" သူကလဲ ပြန်မေးတယ် ၊ သူကိုငေးမောကြည့်နေမိတာပါပဲ ...ချက်ခြင်း ဆိုသလိုပဲ
"ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး နင်ဘယ်တော့ပြန်ထွက်မလဲ မေးတာပါ..ငါမအားတဲ့ရက်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့
နင့်ကို ရန်ကုန်ထိ လိုက်ပို့ပေးမလို့စဉ်းစားထားလို့ပါ" တဲ့
ဘာဖြစ်လို့ ဒီအချိန်ထိအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိမ်ညာနေတာလဲဆိုတာ ကျွန်မ သူ့ကိုမမေးတော့ပါဘူး
ဒီနေ့ထိလဲ မမေးခဲ့ပါဘူး သူလဲခုချိန်ထိအောင် အရင်တိုင်းပါပဲ..ဘာမှမပြောင်းလဲသလို
ကျွန်မလဲ လက်ရှိနေထိုင်ရာ တိုင်းပြည်မှာ ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး...
ခုဆိုမိုးတွေ အရမ်းကိုရွာနေပါတယ်...စံပယ်တွေလဲ ဖွေးဖွေးဖြူအောင်ကိုပွင့် နေပါပြီ
သူကို အလုပ်အားတိုင်းလွမ်းနေမိတာကိုလဲ ကျွန်မဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖြစ်သလို
သူကိုလဲ မပြောပါ ။ သူဖုန်းဆက်တိုင်းလဲ နေကောင်းလား...ကျန်မာရေးကိုဂရုစိုက်ပါ..
ဒါပါပဲ....ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ တစ်ခုခုတော့လိုအပ်နေပါတယ်
အဲတာ ကျွန်မ မသိသလို သူလဲသိပုံမရပါ။။။။။
အချိန်တွေကြာခဲ့တော့လဲ ကျွန်မ ဘာမှမသိချင်တော့ပါ။
သူတို့လည်း ရယ်စရာ ပြောတတ်တယ်...
Posted by စံပယ်ချို | Saturday, June 18, 2011
ကမ္ဘာကျော် လူရွှင်တော်ကြီး ချာလီချာပလင်သည် တစ်နေ့တွင် အိမ်တွင်မွေးထားသော
ခွေးကလေးနှင့် အပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်သည်။
တစ်နေရာတွင် အလွန်ပိန်လှီသော မိန်းမကြီးတစ်ယောက်နှင့်ဆုံသည်။
ခွေးကလေးသည် မိန်းမကြီးဘက် ပြေးသွားပြီး သူမ၏ခြေတောက်ကို လျှာနှင့်လျက်သည်။
ချာလီချာပလင်က အားနာနာနှင့် တောင်းပန်စကားဆိုသည်။
"ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော့်ခွေးဟာ
ပြင်သစ်စာရေးဆရာနှင့် တွေးခေါ်ရှင် ဗော်လ်တိုင်းယား(၁၆၉၄-၁၇၇၈)
ကို ကန်ထဲလှေအပျော်စီးရန် ဒုတိယမြောက် ဖရက်ဒရစ်ဘုရင်က ဖိတ်ခေါ်သည်။ လှေထဲ
ရေစိမ့်ဝင်နေသည်ကိုမြင်သောအခါ ဗော်လ်တိုင်းယားသည် ကမ်းပေါ်သို့ အမြန်ပြေးတက်သည်။
ဖရက်ဒရစ် ဘုရင် ရယ်မောပြီး ပြောသည်။
"ဆရာကြီးက တယ်ကြောက်တာကိုးဗျ၊ ကျုပ်ကတော့ မကြောက်ပေါင်"
ဗော်လ်တိုင်းယား ကအောက်ပါအတိုင်း ပြန်ဖြေသည်။
"ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရင်တွေအများကြီး၊ အဲ....ဗော်လ်တိုင်းယား က တစ်ယောက်တည်းရှိတယ်လေ"
ဟု အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး ဘားနတ်ရှော(၁၈၅၆-၁၉၅၀)
"ကိုယ့်ရဲ့ မိုက်မဲတဲ့ အတွေးတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစား"
စာပေနိုဘယ်ဆုကို ဘားနတ်ရှော လက်ခံရန် ငြင်းခဲ့ဖူးသည်။
ငြင်းရသည့် အကြောင်းကို ဘားနတ်ရှောက ဤသို့ရှင်းပြသည်။
"ရေနစ်တဲ့သူ ကမ်းရောက်အောင် လက်ပစ်ကူးသွားပြီးမှ
မိမိရေးသောကဗျာများ လူသိများ ကျော်ကြားအောင် မည်သို့
လုပ်ရပါမည်နည်းဟု တက်သစ်စကဗျာဆရာက ဘားနတ်ရှော ကိုမေးရာ
၄င်းက မဆိုင်းမတွ ပြန်ပြောသည်။
"မောင်ရင်ရဲ့ကဗျာစာမူကို ချောကလက်ထုပ်ဖို့အတွက် ပေးလိုက်ပါ"
တစ်နေ့သော် ချားလ်စ်ဒါဝင်(၁၈၀၉-၁၈၈၂) ကို မိတ်ဆွေတစ်ဦးက
ညစာ စားရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ညစာစား သည့် စားပွဲတွင်ထိုင်ကြရာ
အလွန်ချောမောလှပသော အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးသည် ဒါဝင်နှင့်ကပ်လျှက်
ကုလားထိုင်တွင် နေရာရသည်။ အမျိုးသမီးက ကနွဲ့ကရအမူအရာဖြင့် မေးသည်။
"မစ္စတာဒါဝင်၊ လူဟာ မျောက်ကဆင်းသက်တယ်လို့ လူကြီးမင်းဆိုတယ်နော်။
အဲဒီအဆိုပြုချက်ဟာ ကျွန်မအတွက်လဲ မှန်တာပဲလားရှင်"
"မှန်တာပေါ့၊ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ခင်ဗျားက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့
သူခေတ်သူ့အခါက အမျိုးသမီးတွေအကြားတွင် အထူးတလည်
ရေပန်းစားခဲ့သော အီတလီစာရေးဆရာ ကာဇာနိုဗာ(၁၇၂၅-၁၇၉၈)
သည် အသက်ငယ်သူ အမျိုးသမီးနှင့် အသက်ကြီးသူ အမျိုးသမီးတို့တွင်
ခြားနားမှုမရှိဟု ယူဆခဲ့သည်။ ၄င်း၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း စာအုပ်တွင်
"မီးပိတ်လိုက်ရင် မိန်းမအားလုံး အတူတူပါပဲ"
ရူပဗေဒပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်း(၁၈၇၉-၁၉၅၅) ကို
ရီလေတစ်ဗီတီ သီအိုရီအကြောင်း ရှင်းပြပါရန် သတင်းထောက်များက
၀ိုင်းမေးကြရာ ၄င်းက ဥပမာပေး၍ရှင်းပြသည်။
"မိန်းမချောတစ်ယောက်ကို ခင်းဗျားပေါင်ပေါ်မှာ တစ်နာရီကြာ
တင်ထားတဲ့အခါမှာ တစ်မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ ခင်ဗျားထင်မယ်။
ဒါပေမယ့် မီးဖိုပေါ်မှာ တစ်မိနစ်ကြာ ခင်ဗျားတက်ထိုင်လိုက်၊
တစ်နာရီလောက်ကြာတယ်လို့ ခင်ဗျားထင်မယ်။ အဲဒါ ရီလေတစ်ဗီတီသီအိုရီရဲ့
(ဖတ်ခဲ့ဖူးသော မောင်ကောင်းထိုက် ဟာသပဒေသာမှ)
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, June 16, 2011
သံသရာ ဟိုဖက် ဘာမှမမြင်ပေမဲ့
တစ်ယောက် တစ်နေရာ မှာဆိုတော့
အပျင်းပြေ သဘောနဲ့ ကစားခဲ့ တာတဲ့
အများ စကား ခါးသလားလို့ မပြောပါနဲ့
စေတနာ စကားမို့ သံတရ ကင်းကင်း
အမှားရှင်းရှင်း ယုံလိုက်စမ်းပါ..... ယုံစမ်းပါ
အသည်း နှလုံး တစ်ခုလုံး
ဆုံးရှုံး ရသူ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်
ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် တစ်ခုပါပဲ။
နှလုံးသား အရိုင်းတွေ ရှိနေမှာ
ပေါက်ကရ ယောင်တိယောင်ချာ ***အလွမ်း*** ၂
Posted by စံပယ်ချို | Tuesday, June 14, 2011
ကွဲအက်ပြီး တေ့ဆက် ဆက်ထားတဲ့
အဖြေမသိပေမဲ့.....ရင်ထဲလဲဘာမှမရှိတော့ပါလား။ ။ ။
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, June 12, 2011
ငါ့ ၀ိညာဉ် ၏ နောက်ဆုံးခရီး
မြင့်မြတ်စွာ နဲ့ နှလုံးသားထဲကိန်းအောင်းနေသော
မေတ္တာတရား ဟာ အမုန်းကန္တာရထဲ
တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် ပိတ်ပြီး
အချစ် ပါရမီ မရင့်ကျက်သေးလို့ပဲ
မာယာတွေ အလွှာလိုက် ခွါချမရတဲ့
ဘ၀ အမှားကြီးတွေ ရလိုက်ပါပြီ။
ငါမင်းကို အရင်မုန်းသင့်တာပဲ ။ ။
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, June 9, 2011
အဆုံးအစမဲ့တဲ့ ကောင်းကင်ပြင် ကသူ့အောက်မှာရှိတဲ့
ဘ၀ အမှားများ အရိပ်မဲထဲက ဖျက်ချင်တာလား
လိမ်ညာမှုတွေက အထပ်ထပ် ရှိနေခဲ့လို့
ဥပေက္ခာတွေ အလွှာလိုက်....တစ်လွှာပြီး ...တစ်လွှာ
မေတ္တာ အမှန်...သစ္စာဧကန် ဆိုရင်တော့
ထိုက်တန်တဲ့ ရောင်ပြန် အလင်း(အနည်းငယ်ဖြစ်ဖြစ်)
အတိတ်က ကံကြမ္မာ အမဲကို
နှလုံးသွေးတွေ အဆုံးရှုံးမခံ ရအောင်
ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ ဆိုခဲ့ပါတယ်
ပျက်အစဉ် ပြင်မရ မလုပ်လိုက်နဲ့နော်...
မေတ္တာ အရင်းခံပြီး နေဖို့ကိုတော့
မိမိကိုယ် မိမိလဲ အပ်နှံပါ၏။
အပူငွေ့တွေ တစ်ထောင်းထောင်းထ နေတဲ့
မောဟအပူ လောကအပူ ဒေါသအပူ တွေနဲ့
အပူတက အပူ သံယောဇဉ်အပူတွေကြား
Posted by စံပယ်ချို | Sunday, June 5, 2011
ငါ့ကို စူးစူးဝါးဝါးငေးမော ကြည့်နေကြပြီ
တစ်နေ့တာ ခရီးဆက်ဖို့ မရှိတဲ့အား
အဲဒီလိုနဲ့ လပေါင်း များစွာ
တလက်လက် တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်စင်လေးတွေနဲ့
လ လေးတစ်ခြမ်းက မင်းကိုမေးနေလေရဲ့
ခုမှ ဗေဒင်ပညာသင်နေဆဲပါလို့။ ။
ကိုယ်ခန္ဓာ ထဲက မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို
မြက်စားတဲ့ ခြင်္သေ့ မင်းဖြစ်ချင်နေတာလားကွယ်
တရား သဘောနဲ့ အမှားကို
ဖြေးဖြေးလေး လျှောကျနေတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား
ပျက်တာများလို့ တစ်ခါထဲ ခ၀ါချလိုက်တော့....
တလိမ့်လိမ့် စီးဆင်းနေတဲ့ မင်းနှလုံသားက သွေးစက်တွေ
***online မှာတွေ့ပြီး*** ဤသို့ မဖြစ်သင့်ပါ
Posted by စံပယ်ချို | Friday, June 3, 2011
0nline ကနေ ပင်လယ်ရပ်ခြား
အမှာစာ မပါပဲ တူတူနေခဲ့ ကြပြီကွယ်။
ဘာအလုပ် ဖြစ်ဖြစ် မလုပ်နိုင်ဘူး
ကွဲကွဲ ရှရှ ဘ၀မလှ
မရိုးရအောင် အရောင် ဆန်းဆန်းတွေဝတ်ပြ
ဗြမ္ဗာစိုလ် တရား မရှိလေအား
ဗုဓ္ဒ မြန်မာ မိန်းကလေးပါ
မမြဲသောကံ မမှန်သော သစ္စာ
နွံရမက်ထဲ တဲ့တဲ့ နှစ် တာအဆန်းအပြားမဟုတ်
လက်ရှိ ကျွန်မနေထိုင်ရာအရပ်မှာ အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော
Posted by စံပယ်ချို | Thursday, June 2, 2011
အဲဒီလိုနဲ့ နှလုံးသားတံခါးတွေ ပိတ်ပြီး
ဝေဒနာ ဖုန်မှုန့်များ ရင်ဘတ်ထဲကို
ကြိုးညှိ မထားတဲ့ ဂီတာတစ်လက်
ချစ်သူ မီးအိမ်ခမျာ မီးဇာကုန် ဆီခန်း
သို့ပေမယ့်လဲ ရင်ထဲမှာ တသသ ရှိနေဆဲပါ။
***အခုသူမရှိတော့ပါ*** (ကိုခြူးသို့) ။ ကိုယ်တိုင်ရေ...